Nhau - Chii chinonzi roll pabhotoro? Kushanda huwandu hwemabhodhoro anotenderera
Chii chinonzi roll pabhotoro? Kushanda huwandu hwemabhodhoro anotenderera
Iko kune kwakawanda kudiwa kweshoko kutsvaga maviri ekuzora: imwe ndeye kumonera bhodhoro uye imwe yacho iri chinotenderera bhodhoro. Asi ivo rudzi rwechigadzirwa.Kumonera pamabhodhoro mabhodhoro anotenderera, asi maitiro emunhu wese ekutsvaga akasiyana.Saka, Zvikamu Shanghai Rainbow Industry Co., Ltd. inokuudza kuti roll iri pabhodhoro chii uye kupi kwainoshandiswa.
Chii chinonzi a kumonera bhodhoro?
Roll-pane bhodhoro, inozivikanwa se roller bhodhoro, iri mhando yakajairika yepurasitiki yekurongedza bhodhoro uye inoshandiswa zvakanyanya nevanhu. Mabhora ekumonera-bhora anowanzove nekwanisi kadiki. Rolling mabhora akaiswa pamusoro wehombodo musoro kuitira kuti vanhu vagone kunyorera zvakaenzana, kudzivirira kuyerera kwemvura, uyezve nekukwiza muviri. Inowanzo shandiswa sekuputira zvizorwa maziso ekuzora, miromo yemuromo, zvinonhuhwirira, mafuta ekumeso, maoiri akakosha, mishonga, magel anticretic, uye zvigadzirwa zvevana. Kune mhando mbiri dzeroller mabhora pamusoroemabhodhoro e rollerball: epurasitiki nesimbi mabhora. Kazhinji, mabhora esimbi anoshandiswa pakuzora mabhodhoro eziso rekirimu, nepo mapurasitiki achishandiswa zvigadzirwa zvakachipa zvakadai semiromo, zvichienderana nemutengo wechigadzirwa.
Kukura kwekushandisa kwe mabhodhoro anotenderera
Zvizoro zvinoshandiswa zvakajairika kumabhodhoro-ekuisa-pamabhodhoro. Inofananidzwa ne spray, roll-on bhodhoro rinogona kuenzanisira antiperspirant uye muviri mafuta paganda pamusoro, uye ganda rinonzwa kutonhorera mushure mekuumburuka-mberi. Mune dzimwe nzvimbo dzakatarwa,roll-pane zvigadzirwa vane hunyanzviHanghai Rainbow Maindasitiri Co, Ltd.. inyanzviroll kumugadziri webhodhoro.
Mishonga kurongedza imwezve nzvimbo yekushandisa yakakosha yemabhodhoro anotenderera. Semutakuri weiyo antipyretic gel, iro rinotenderera bhodhoroinogona zvakaenzana kuparadzira mishonga gel paganda rinoda kudzora kupisa, uye panguva imwechete, iko kunzwa kunotonhorera kunobatsira kupisa kupisa. Iyo inodzivirira iyo yekutsamwa uye kusagadzikana kunokonzerwa neyakajairwa panyama kupisa kupisa, uye inovandudza kusaenzana kwekushandisa kwemaoko.
Matambudziko anofanirwa kutariswa paunenge uchivhara roll-on mabhodhoro
Isu tinoziva kuti bhodhoro rakapedzwa rinowanzoiswa mumabhodhoro nemaoko mushure mekunge muviri uye chivharo zvaburitswa. Kazhinji, kumabhodhoro kunongoda kuomesa chivharo zvishoma nezvishoma, icho chiri kukurumidza, asi iro bhora-rekuputira rine mamwe marozari pamusoro wehombodo, saka kudhiraivha kunonetsa uye kunotora nguva. Uye zvakare, nekuti iyochinotenderera bhora bhodhoro musoro ibhora resimbi, inokonzeresa kurwadziwa kwemunwe painosvinwa mumuviri bhodhoro, uye huwandu hukuru hwemabhodhoro hunokonzera kukuvara kwemunwe. Naizvozvo, zvakanakisa kupfeka magurovhosi kuti uzvidzivirire kana uchizadza bhora rinotenderera. Minwe.
Zvikamu Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd. ndiye mugadziri, Chizita chayo iRB PACKAGE, Shanghai rainbow package Ipai imwechete-yekumira yekuzora yekupaka.